यसरी फस्दैछन् चक्रब्युहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड – Tourism News Portal of Nepal
यसरी फस्दैछन् चक्रब्युहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सिंहदरबारको तातो कुर्सी ‘भालुको कन्पट’ जस्तै बन्न थालेको छ ।
भालुको कान समातिराखौं भने कहिलेसम्म समातिराख्ने ? छाडौं भने यो भालुले आफैंलाई टोक्छ ।
अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन बाटो लेलान् ? यो उनले आफैं जान्ने कुरा हो । तर, कुनै न कुनै जोखिम नमोलिकन यसैगरी ‘आइडल’ भएर बसिरहने छुट अब प्रचण्डलाई छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने गरेका छन्- म जोखिम मोल्ने नेता हुँ ।साभार अनलाइनखबर